उच्च जोखिम बढेपछी झापाका १० पालिकामा सिलबन्दी गरियो – Sapana Sanjal
July 29, 2021 135
Sapana Sanjal : झापा । कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहेको झापाका १० पालिकामा सिलबन्दी गरिएको छ । मेचीनगर, हल्दिबारी, बुद्धशान्ति, कनकाई, कमल, दमक, गौरादह, शिवसताक्षी, अर्जुनधारा र बिर्तामोडमा कोभिडको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सिलबन्दी गरिएको हो । पन्ध्र पालिकामध्ये भद्रपुर, गौरीगञ्ज, बाह्रदशी, झापा र कचनकबलमा सिलबन्दी गर्ने बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सोचविचार गरिरहेको जनाएका छन् ।
Prevमध्यरातमा आफ्ना नजिककाहरुलाई सुटुक्क बोलाएर खोप लगाउन थालेपछि यसरी लखेटिए मेयर पराजुली
Nextबेच्ने अर्थमन्त्री, किन्ने स्वास्थ्य मन्त्री !
गौतम बुद्धका ५ अनमोल वचन, तपाईँलाई कति उपयोगी ?
वृद्धवृद्धा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने तयारी